ထိနျးမရတော့ပါ – My Blog
ဒျေါမိမိတဈယောကျ မိုးအေးအေးနဲ့ကုတငျပျေါမှာ ဖုနျးလြောကျပှတျနသေညျ။ အမှတျမထငျ အပွာစာပမြေားစုစညျးရာထဲ ဝငျကွညျ့လိုကျမိပွီး ဇာတျလမျးတဈပုဒျကို ဖတျမိလိုကျသညျ။ ဇာတျလမျးက ရုံးတဈရုံးကို အခွခေံပွီးယောကျြားနဲ့ မိနျးမနမျးစုပျယကျတာတှေ ကိုငျတှယျပှတျသပျတာ တှေ တနျဆာကိုစုပျယကျတာတှေ နညျးပေါငျးစုံနဲ့ ကာမစပျယှကျတာတှကေို ပဈပဈနှဈနှဈ သုံးနှုံးရေးထားတာ ဖတျရသညျ။ စာရေးသူရဲ့ ရေးသားမှုက ဆှဲဆောငျမှုရှိလှနျးလို့ ဆကျဖတျရငျး စောကျစိထဲကယာပွီးပွီးသှားလို့ ထမီပျေါကနေ စောကျစိကိုဖိပွီး ကာမအရသာကို ခံစားလိုကျရသညျ။
အထကျတနျးပွ အပြိုကွီးဆရာမ ဒျေါမိမိတဈယောကျ ခါတိုငျးစိတျထလို့ အာသာဖွတောထကျ ပိုကောငျးပါလားလို့ တှေးနမေိသညျ။ အသကျ ၃၀ သာရှိသေးတဲ့ အပြိုကွီးဆိုပမေဲ့ သှေးနဲ့ကိုယျသားနဲ့ကိုယျမို့ ကာမအရသာကိုတော့ ခံစားမွဲဖွဈသညျ။ ဇာတျလမျးကို ဆကျဖတျရငျးထမီထဲ လကျလြှိုကာ စောကျဖုတျကိုဖှဖှလေးပှတျရငျး ဖီးလျဆကျယူလိုကျသညျ။ ဇာတျလမျးကလညျး ခပျကွမျးကွမျး ဖှဲ့နှဲ့ပုံကလညျး ကောငျးလှနျလို့ စိတျတှအေကွှဆုံးဖွဈနရေသညျ။
“ဆရာမ-” ဆရာမနဲ့ချေါသံကွားမှ သူအခြိနျပိုသငျပေးဘို့ ချေါထားတဲ့ဝလေငျးကို သတိရသှားလို့ ထမီးဝတျကာ တံခါးသှားဖှငျ့ ပေးလိုကျသညျ။ ပွနျအလှညျ့မှာတော့ ဆရာမထမီမှာ ကှကျနတောကို ဝလေငျးမွငျသှားပွီး ထူးဆနျးနသေညျ။ ဆရာမစိတျပါပွီး ကှကျနတော ဘာကွောငျ့ပါလိမျ့လို့လညျး တှေးမိလိုကျသညျ။ စာသငျတော့လညျး ဆရာမအသံက တုနျပွီးခွောကျကပျနသေညျ။ မကျြလုံးကလညျး ခါတိုငျးနဲ့မတူဘဲ ဆငျးနသေညျ။ ဝလေငျးစာသငျနတောကို စိတျမရောကျဘဲ ဆရာမအကွောငျးဘဲ စဉျးစားနေ မိသညျ။ ဒါကွောငျ့… “ဆရာမ–ဘာဖွဈနလေို့လဲ– သားကိုစာသငျတာ–ဒီနတေ့မြိုးကွီးဘဲ” လို့ပွောတော့ မိမိသူပွောငျးလဲနတော ကို ဝလေငျးသိပါလားဆို လနျ့သှားတုံး တဆကျတညျးဝလေငျးက… “ဆရာမထမီနောကျမှာလညျး ကှကျနတေယျ” ပွောလိုကျလို့ မကျြနှာကွီးနီရဲသှားတော့သညျ။
“ဆရာမခဈြသူရောကျနရေငျလညျး သားပွနျလိုကျမယျ” လို့ဆကျပွောတော့ ပိုဆိုးကုနျတော့သညျ။ “ဟငျ့အငျး ဆရာမမှာ–ခဈြသူမ ရှိဘူး” လို့ခကျြခငျြးပွနျပွောလိုကျသညျ။ ဒါမဲ့ သူအဲ့လိုပွောပွီးခနအကွာ ဒီကောငျလေး ငါစိတျကွှနလေို့ အရညျထှကျပွီးကှကျနေ တာကို သိပါလားလို့တှေးမိပွီး ရှကျနတေော့သညျ။“ကဲ မငျးကွညျ့ရတာလညျး စာထဲစိတျမပါသလိုဘဲ ဒီနဒေ့ါလောကျဘဲပေါ့နျော” ပွောအပွီးဝလေငျးစာအုပျတှထေဲ့နတေုံး မိုးက သဲသဲမဲမဲရှာခလြာတော့သညျ။ “မိုးတိတျမှဘဲ ပွနျတော့” လို့ပွောပွီး မိမိအိမျသာ ထဲသှားပွီး စောကျဖုတျကို ရဆေေးလိုကျသညျ။ ဝလေငျးဧညျ့ခနျးဆကျတီမှာ ထိုငျပွီးဂိမျးဆော့နသေညျ။ မိမိလညျး ခပျတညျတညျနဲ့ သူမကျြနှာခငျြးဆိုငျမှာ ထိုငျပွီးအပွာစာပထေဲက နောကျတဈပုဒျကို ဆကျဖတျဖို့ဖှငျ့လိုကျသညျ။ ခဈြတဲ့ဆရာမဆိုတဲ့ ခေါငျးစဉျဖွဈ ပွီး တပညျ့နဲ့ဆရာမ အပွာဇာတျလမျးဖွဈနသေညျ။ သူဒငျ့ဖွငျ့ ဇာတျလမျးကိုပွောငျးဘို့ လုပျပမေဲ့ စာသားက ဆှဲဆောငျနလေို့မ ပွောငျးဘဲ ဆကျဖတျနမေိသညျ။ ပေါငျခွံမှာ နှေးကနဲစီကလြာတာသိလိုကျပွီး စောကျစိကကွငျလာသညျ။ သူထိမျးမရဘဲ ခန်ဓာကိုယျ တှနျ့လိနျကာ အငျးဟငျးဆို ညီးမိလိုကျသညျ။ ဝလေငျးမကျြလုံးက သူဆီရောကျလာပွီး ကွညျ့တဲ့အကွညျ့က သူဖီးလျတကျသှား တယျဆိုတာ သိတဲ့ပုံရပွီး ထလာကာ.. “ဆရာမရယျ သားသိတယျ”
ဆိုပွီးဆှဲထူကာ ဖကျထားသညျ။ မိမိလညျး ကာမအရှိနျမကုနျသေးဘဲ ဝလေငျးဖကျထားတာကိုက တမြိုးပိုကောငျးနရှောသညျ။ ဝေ လငျးက မိမိနှုတျခမျးလေးကို ဖှဖှလေးစုပျနမျးတော့ မိမိနှုတျခမျးလေးတဆတျဆတျတုနျနရှောသညျ။ ဝလေငျးပုဆိုးအောကျက တောငျလာတဲ့လီးက ပေါငျခှမှာလာထောကျပွနျတော့ မိမိဒူးပငျမခိုငျတော့လို့ ဝလေငျးကို အတငျးပွနျဖကျထားရသညျ။ တကိုယျလုံး တုံရီနရေငျး အသံတုနျတုနျနဲ့.. “သားရယျ ဧညျ့ခနျးထဲမှာကှာ” လို့ပွောတော့ ဝလေငျးကခါးကနဖေကျပွီး အိပျခနျးထဲချေါသှားသညျ။ အခနျးထဲရောကျတော့လညျး ဖကျပွီးနှုတျခမျးကို နမျးပွနျသညျ။ ဝလေငျးကနမျးရငျး မိမိထမီးကို ဖွခြှေတျလိုကျလို့မိမိလနျ့သှား ပွီး… “သားကလဲကှာ” ဆိုပွနျကောကျတော့ ခွနေဲ့နငျးထားကာ ပွနျဆှဲထူသညျ။ မိမိတကိုယျလုံးထူပူသှားပွီး ကျဖေုတျကို လကျနဲ့ အုပျထားသညျ။ ဝလေငျးက နမျးနရေငျးကုတငျဆီကို တှနျးပို့ကာ ကုတငျစောငျးမှာ တှနျးလှဲပွီး တကျခှသလိုအနအေထားနဲ့ နှုတျခမျး ကို ဆကျနမျးနသေညျ။ မိမိကတဈခကျြခကျြ ပွနျစုပျနမျးနသေညျ။ ဝငျေးလငျးက အိမိအကြီကွယျသီးတှကေို ဖွုတျပွီးနို့တှကေို စို့ ပေးနပွေနျသညျ။
“အားလားလားသားရယျ–တို့ခေါငျးတှမေူးလာပွီ-ရှီး-အို” နဲ့ညီးနတေုံးဝလေငျးက စောကျဖုတျကို ကုနျးယကျပွနျသညျ။ “အီး-မ လုပျနဲ့-မလုပျနဲ့” လို့မိမိကတာပမေဲ့မရပါ။ ဝလေငျးလြာက စောကျဖုတျပျေါမှာ အထကျအောကျ စုံခြီဆနျခြီပွေးလှားနသေညျ။ “အီး ဟီး–အရမျးဆိုးတယျကှာ- ဆရာမကွောကျတယျ–အီး” နဲ့ပွောနတေုံးဝလေငျးလကျက နို့သီးခေါငျးလေးနှဈကို ကိုငျကစားပေးနပွေ နိသညျ။ မိမိတအားကို ကောငျးနပွေီးခေါငျးကို ခါယမျးနရှောတာ ဆံပငျတှတေောငျ ရှုပျထှေးကုနျလာသညျ။ ကာမပနျးတိုငျဆီ ရောကျတိုငျး ကော့ကော့ပေးရငျး တရှီးရှီးနဲ့ညီးနရှောသညျ။ မကျြနှာကနီရဲပွီး အဆီပွနျနရှောသညျ။“တျောပွီတျောပွီ–တို့-တအား မောနပွေီ” ပွောမှဝလေငျးရပျလိုကျသညျ။ မိမိမကျြစိမှိတျကာ နဖူးပျေါလကျတငျပွီး တအငျးအငျးတိုးတိုးလေး ညီးနသေညျ။ ဝေ လငျးကတော့ သူဆရာမစောကျဖုတျကွီးကို မကျြတောငျမခတျဘဲ ကွညျ့နသေညျ။ စောကျမှေးပါးပါးလေးအောကျက စောကျစိလေး က သေးပမေဲ့ ပွူထကျနလေို့ သှူုဆရာမလကျနဲ့ အာသာဖွနေတောမနဲပါလားလို့ တှေးနသေညျ။ စောကျဖုတျဘေး နှုတျခမျးသားပါး ပါလေးကွားမှာ အရညျတှနေဲ့ လဲ့နတေဲ့အတှငျးသား ပနျနုရောငျနဲ့အနီရောနတေဲ့ အသားနုလေးတှဖွေဈသညျ။ မိမိအမောဖွပွေီးမှ သူစောကျဖုတျကို ဝလေငျးကွညျ့နတေော့မှာဘဲဆိုတဲ့ အသိဝငျပွီးလကျနဲ့လှမျးဖုံးကာ မကျြလုံးဖှငျ့ကွညျ့တော့ ဝလေငျးကပွုံးပွီး….
“ဖုံးမနပေါနဲ့ ဆရာမရယျ– သာသခြော- ကွညျ့ပွီးသှားပွီ” လို့ပွောသညျ။ မိမိကလူဆိုလေးဆိုထထိုငျပွီး ဖကျလိုကျသညျ။ ပုဆိုး အောကျကနတေောငျနတေဲ့ ဝလေငျးလီးက မိမိပါးဘေးကို လာထောကျနသေညျ။ “ဒီတခါ–ဆရာမကွညျ့အလှညျ့” ဆိုပွောပွီးဝေ လငျးပုဆိုးကို ဖွခေလြိုကျသညျ။ ဒဈပွဲပွဲကွီးနဲ့ ဝလေငျးလီးတုတျတုတျကွီးကို မိမိတှလေို့ကျသညျ။ သူတို့နှဈဦးရဲ့ ရငျနှီးခငျမငျမှုက ခါတိုငျးထကျပိုသှားသညျ။ မိမိက သူဖတျဖူးတဲ့ အပွာဇာတျလမျးထဲကအတိုငျး ဝလေငျးလီးကို ငုံစုပျပေးလိုကျတော့သညျ။ “ကနျတော့နျော ဆရာမ” လို့ ဝလေငျးကပွောတော့ ကိစ်စမရှိ ကွောငျး မိမိကလကျကာပွကာ ဆကျစုပျပေးနသေညျ။ ဇာတျလမျးထဲ ကပါသလို လီးထိပျကို လြာနဲ့ထိုးလိုကျ လီးကို နှုတျခမျးနဲ့ညှပျဆှဲလိုကျ လုပျတော့ ဝလေငျးခါးကော့ ခွဖြေားထောကျကာ ညီးသံထှကျ လာသညျ။ ဒါကို မိမိကသဘောကပြွီး သူအပွာစာဖတျခဲ့တဲ့အကြိုးဆိုပွီး တှေးမိကာ ဆကျစုပျပေးနသေညျ။ ဝလေငျးစိတျတအား ပါလာပွီး…
“လိုးခငျြတယျ–ဆရာရယျ” ဆိုတော့ “သားကလညျးကှာ–အဲ့လိုကွီးမပွောနဲ့လေ” လို့ပွောပွီးဝလေငျးဗိုကျကို ခေါငျးစောငျးကပျ ကာ ဖကျထားသညျ။ ပွီး.. “သား–ဆရာမအဲ့လောကျထိ–မစှနျ့စားရဲဘူးကှာ” လို့ပွောသညျ။ ဝလေငျးက.. “သား–အပွငျမှာပွီးမှာ ပါ” ဆိုတော့မိမိက.. “အဲ့ဒါမဟုတျဘူး– ဆရာမနဲ့တပညျ့–မသငျ့တျောဘူး ထငျလို့ပါ” ပွောသညျ။ ဝလေငျးလညျး တအားတငျနေ ပွီးမို့… “ဆရာမနဲ့– သားနှဈယောကျထဲ–သိတာဘဲဗြာ” လို့ပွောသညျ။ မိမိက ပွုံးပွီး… “သားနှုတျလုံမယျပေါ့လေ” လို့ဆကျ ပွောသညျ။ ဝလေငျးခေါငျးညိမျ့ပွတော့ ဝလေငျးကိုယျကွီးကို အတငျးဖွဈညှဈပွီး သဘောသဘောဆိုကာ ကုတငျစောငျးမှာဘဲ ပကျလကျလှနျအိပျခလြိုကျသညျ။ အပွာဇာတျလမျးထဲက ကုတငျစောငျးမှာ သိပျကောငျးတယျဆိုတာကို မိမိသတိရလိုကျသညျ။ ဝေ လငျးက ဒူးနှဈဖကျကို လကျနဲ့ဆှဲမွှောကျတော့မိမိက…“ဖွေးဖွေးတော့လုပျနျော– ဒါတို့အတှကျ– first timeမို့ပါ” လို့ပွောသညျ။ ဝလေငျးကလီးကို စောကျဖုတျဝမှာတပွေီ့း ဖွေးဖွေးလေးထိုးသှငျးနသေညျ။ ဒဈကြှံဝငျအပွီးမိမိ ဆီက… “အီးဟီး-သားရယျ– ဖွေးဖွေး” ဆိုလကျနဲ့တားထားသညျ။ ဗွဈကနဲဝငျသှားတော့ မိမိစောကျဖုတျကယားပွီး… “အမလေး” ဆိုတဈခကျြအျောကာတှနျ့ သှားသညျ။ လကျနဲ့တောငျ ထဲ့အဆောငျမခံဘူးတဲ့ မိမိတဈယောကျ သူ့စောကျဖုတျကငျြးကငျြးလေးထဲ လီးတဈခြောငျးလုံ အပွညျ့ ဝငျတော့နဲနဲတော့ နာသလိုခံစားရလိုကျသညျ။ ပွညျနှကျနပေါလားဆိုတဲ့ အသိဝငျနတေုံး ဘှတျဘှတျဘှတျနဲ့အဆောငျ့ခံရ တော့သညျ။
“အီး–အီး–အိုး”နဲ့အံကွိတျရငျး မိမိကောငျးသလိုရှိလာသညျ။ လီးဒဈလုံးကွီးရဲ့ စောကျဖုတျအတှငျးသားတှကေို ပှတျဆှဲတဲ့ အထိအတှကွေ့ောငျ့ သူတကိုယျလုံးကွငျပွီး အထှဋျအထိပျရောကျသှားခဲ့သညျ။ “အီး–အီးဟီး–ကောငျးလိုကျတာကှာ” ဆိုတ ဆတျဆတျတုံနရှောသညျ။ ဝလေငျးက မနားတမျတဘှတျဘှတျနဲ့ ဆကျတိုကျဆောငျ့နလေသေညျ။ “အီး–သားရယျ-တို့ကောငျးနေ ပွနျပွီး–လုပျလုပျ-ဆောငျ့ပါ-လုပျပါ–လိုးပါကှာ” ဆိုအတားအဆီးမဲ့စကားတှေ ထှကျလာတော့သညျ။ မိမိကောငျးနတေုံး ဝလေငျး ကဗွှတျကနဲလီးကို ဆှဲထုတျကာဂှငျးထုရငျးလီး ရညျတှေ ပနျးထုတျနတေော့သညျ။ ဒါကိုမကျြလုံးလေးစငျးပွီး မိမိကွညျ့နရှောသညျ။ ပွီးမှ ဝလေငျးက သူ့ဆရာမအပျေါ မှောကျအိပျပွီးပါးတှကေို နမျးကာ… “လိုးအုံးမှာနျော” လို့ပွောတော့မိမိက… “တနကေုနျလိုး” လို့ရငျးရငျးနှီးနှီးပွနျပွောသညျ။
“ကဲထအုံး–တို့ရှုးပေါကျပွီး–ရဆေေးအုံးမယျ”ျ လို့ ပွောပွီးထမီကိုကောကျကိုငျလို့ ဝလေငျးက ပွနျလုထားသညျ။ ဖငျပွောငျ ပွောငျနဲ့ ထှကျသှားတဲ့ သူ့ဆရာဖငျကိုကွညျ့ရငျး အတျောဂြောကောငျးပါလားလို့ တှေးမိလိုကျသေးသညျ။ ဝလေငျးလညျး ရဆေေး ပွီးပွနျလာရော မိမိက ဝလေငျးလီးကို လကျနဲ့ဖွဲကွညျ့ကာ… “မှိုကွီးအတိုငျးဘဲနျော”ျ လို့အပြိုဖမျြးလေးတဈယောကျလသေံနဲ့ ပွောလသေညျ။ ဝလေငျးက မိမိရဲ့အကြီနဲ့ ဘရာစီယာကိုပါ ခြှတျပေးပွီး သူ့စှပျကယျြပါခြှတျလိုကျသညျ။ “ဟခေု့န–သူပွီးတော့– လကျ့နဲ့လုပျတာ–ယောကျြားလေးတှေ–ဂှငျးထုတယျ–ဆိုတာလား” ဆိုပွုံးပွီးမေးသညျ။ ဝလေငျးက.. “ဟုတျတယ”ျ လို့ပွော ပွီး…. “မိနျးခလေးတှလေကျနဲ့ပှတျ– အာသာဖွတော ဘယျနရောလဲ ဆရာမ” အပွငျမှာမိုးကဝုနျးဒိုငျးကွဲလာပွနျသညျ။ ကုတငျပျေါ မှာ ခွစေငျးပွီးကားထိုငျနတေဲ့ ဝလေငျးပေါငျနှဈခုကွားကို မိမိက ဝငျတိုးထိုငျပွီးမှီထားသညျ။ ဝလေငျးလကျတှကေ မိမိကိုဖကျထား ရငျး နို့သီးခေါငျးလေးတှကေို လကျနဲ့ပစားပေးနသေညျ။
“တို့ကို-သူဘယျနရောကိုငျကိုငျ–ကောငျးတယျ သိလားလို့” ဆရာမအပြိုကွီးက အပြိုပေါကျစလေးလို လသေံနဲ့ပွောနလေေ သညျ။ သူလကျနောကျပွနျနဲ့ ဝလေငျးလီးပြော့ကွီးကို ကိုငျစှ ပေးနသေေးသညျ။ပွီး.. “မငျးက–တို့ကိုဆရာမလို့–မချေါဘဲ မမလို့ဘဲ ချေါတော့နျော– တို့ကတော့ ကွိုကျသလိုချေါမယျ– ဟုတျပွီလား” ဆိုတော့ဝလေငျးက… “မမ–မမ–မမ” လို့ချေါတော့ အပြိုကွီး မိမိက… “ရှငျ့” ဆိုထူပွီးရီလိုကျကွသညျ။ ပွီးဝလေငျးရဲ့ ဘယျဘကျလကျမောငျးဘကျကနေ ခေါငျးတခွမျးစောငျးပွီး ဝလေငျးကို မိမိက ကဈဆငျဆှဲတော့သညျ။ ဝလေငျးက သူလြာလေးကို မိမိပါးစပျထဲထဲ့ပွီး လြာခွငျးကလိပေးလိုကျသညျ။ နိုသီးခေါငျးတှကေို စှ နတေဲ့လကျတဖကျကို မိမိပေါငျကွားဆီပို့ပွီး စောကျစိလေးကို ပှတျပေးလိုကျသညျ။
“အို–ကလေးရယျ–မမအရမျးကောငျးတယျကှာ” လို့တိုးတိုးလေးပွောလာသညျ။ ဝလေငျးလီးလညျး မာစပွုနပွေီးဖွဈသညျ။ “ကလေးရယျ–မမဘာဂြာ–လိုခငျြတယျ” လို့တောငျ တောငျးဆိုလာတော့သညျ။ ဝလေငျးက လြာနဲ့ မိမိစောကျဖုတျအတှငျးသား လေးတှကေို ထိုးပေးလိုကျသညျ။ စောကျရညျအရညျခဲလေးက ဝလေငျးလြာမှာကပျပါသှားသညျ။ “အို–မောငျရယျ–တအားကောငျး လှခညျြ့လာကှယျ–ခဈြတယျမောငျ” ဆိုခြှဲပဈတဲ့အသံလေးနဲ့ပွောလာသညျ။ ဝလေငျးက စောကျဖုတျဘေးသားလေး နှဈခုကို ပါးစပျထဲမွုပျပါလာအောငျ စုပျယူလိုကျသညျ။ “အူးရှီး–အားလားလား–မောငျက တအားတျောတာဘဲကှာ– တို့ကောငျး အောငျ လုပျပေးတတျတယျ– အငျးဟငျး” ဆိုမိမိဖငျကွီးကွှတကျလာသညျ။ မိမိက သူ့လကျနဲ့နို့အုံတှကေို ပှတျနလေို့ ဝလေငျး လကျနဲ့ လှမျးပှတျပေးလိုကျသညျ။ပွီး.. “မမ-ပွီးအောငျ မောငျစောကျစိကို လုပျပေးမယျ” ဆိုတော့.. “အငျး” လို့မိမိက ပွနျပွောသညျ။ ဝလေငျးက လြာနဲ့စောကျစိထိတယျဆိုယုံဘဲထိပွီး ဝိုကျယကျပေးလိုကျသညျ။ မိမိရငျဘတျကွီး မောကျလာလိုကျ ပွနျကွသှားလိုကျဖွဈနသေလို ဗိုကျကလညျး ဖေါငျးလာလိုကျပွနျ ခပျြသှားလိုကျနဲ့ ခါရမျးနတေော့သညျ။
“မောငျရယျ–ကောငျးလိုကျတာ-တို့အရမျးကောငျးတယျ မောငျရယျ-ရှီး–ကြှတျကြှတျ” နဲ့ဆကျတိုကျညီးရငျးပွောနသေညျ။ မိမိခွေ တဖကျက လီးကွီးကို လိုကျစမျးပွီးပှတျနသေညျ။ “မောငျရေ–တို့ပွီးခငျြနပွေီကှာ–အတငျးဖိစုပျလိုကျ” လို့ပွောလာသညျ။ ဝေ လငျးလဲနှုတျခမျးကို စူပွီးစုပျပဈလိုကျသညျ။ “အူးရှီး-အမလေးလေး–အီး–အို့ဟိုး–ကောငျးလိုကျတာမောငျ” ဆိုမိမိကာမအရသာ ထူးကို ရသှားတော့သညျ။ စောကျဖုတျဝက အရညျတှထှေကျကလြာလို့ ဝလေငျးစုပျယူလိုကျသေးသညျ။ မိမိက ဝလေငျးကိုဆှဲဖကျ ပွီး ကိုယျပျေါတငျကာ ဖကျထားသညျ။ လီးကစောကျဖုတျဝမှာ တနေ့တောတာ ဝလေငျးထိုးသှငျးလိုကျသညျ။ လီးတဝကျလောကျ ဝငျနပွေီး မိမိမှိနျးနသေညျ။ “မောငျရယျ-တို့ပွီးနတော- မောငျ့လီးကွီးထိုးထဲ့တော့– ပိုကောငျးတယျ” လို့ပွောလိုကျသေးသညျ။ “မမ-အရညျတှတေအားထှကျတယျနျော” လို့ပွောလိုကျတော့…. “ကောငျးတာကိုမောငျရဲ့” လို့မိမိကပွနျပွောသညျ။
“မောငျ–လိုးတော့လကှော” ဆိုပေါငျကားပွီးခွမွှေောကျပေးလိုကျသညျ။ “ရှမေိရေ-ရှမေိ” ရဆေိုလှလှဌေးချေါသံက မိမိအတှကျ ငှကျဆိုးထိုးတဲ့အသံလိုဖွဈနသေညျ။ မိမိက “ရှုး–တိုးတိုးနနေျော” အဝတျတှကေမနျးကတနျးဝတျပွီး အခနျးထဲက ပွေးထှကျသှား သညျ။ အဝတျအစားက ကပိုကရိုဖွဈသညျ့အပွငျ ဆံပငျတှလေညျး ပှနတောမွငျလို့ လှလှဌေးက မိမိကိုကွညျ့ပွီး အံ့အောသှား သညျ။ အမွဲတနျး သပျသပျရပျရပျနတေတျသညျ့မိမိကို လှလှဌေးထူစမျးနပွေီး… “ဟဲ့-နငျဘယျလိုပုံ ဖွဈနတောလဲဟ” လို့ပွော တော့ မိမိကိုယျ့ကိုယျကို မလုံဖွဈသှားသညျ။ အောကျပိုငျးမိုးရတှေစေိုနတေဲ့ လှလှဌေးက ခါတိုငျးလိုဘဲအပိုပါလာတဲ့ အဝတျတှလေဲ ဘို့ မိအိအိပျခနျးကိုဝငျလဲဘို့ လုပျတော့မိမိကဆှဲထားပွီး… “ဧညျ့သညျရောကျနလေို့” လို့ပွောလိုကျမိတော့သညျ။ လှလှဌေးက မကျြလုံးပွူးသှားပွီး… “ဟယျ–နငျစှံနပွေီကို-“ လို့ပွုံးရငျးပွောသညျ။ ပွီးလှလှဌေးရခြေိုးခနျးထဲသှားပွီး အဝတျလဲနသေညျ။ မိမိ ပထမတော့ ရှကျသှားပွီးနောကျပိုငျးမှ ဘီးအီးဒီတကျစဉျက သူတို့နှဈယောကျအပွနျအလှနျနမျးရှုံ့ပွီး ကဲခဲ့ကွတာဘဲဆိုပွီး စိတျဖွေ လိုကျသညျ။ သူတို့က ပွောမနာဆိုမနာ တဈယောကျအကွောငျး တဈယောကျသိသူမြားလညျး ဖွဈကွတာကိုတှေးပွီး စိတျသကျသာ ရာရသှားသညျ။ နောကျသူကလညျး အိမျထောငျကှဲမို့ နာလညျပွီး ရှကျစရာမရှိဘူးလို့ပါ တှေးလိုကျသညျ။ ရခြေိုးခနျးထဲက လှလှ ဌေးထှကျလာတော့..
“မငျးက စိုပွတေဲ့ဘဝရောကျနပွေီပေါ့လေ–ငါကတော့ နပေူထဲ ခြောကျကပျနတေဲ့ဘဝပါ” လို့ညှိုးငယျစှာန ပွောလာသညျ။ ဒီလိုဆို တော့လညျး မိမိက လှလှဌေးကိုသနားသှားပွနျသညျ။ ပွီး “ငါ့ကို မိတျဆကျပေးလဟေယျ” လို့ဆိုပွီးပွောလာသညျ။ အဲ့ဒီကမြှ မိမိ က တပညျ့လေးဖွဈတဲ့အကွောငျးပွောပွလိုကျသညျ။ “နငျပွောတာနဲ့ငါတောငျ စိတျဝငျစားသှားပွီဟယျ” လို့ပွောလာသညျ။ လှလှ ဌေးက အိပျခနျးထဲဝငျတော့ မိမိမတားတော့ပါ။ ဝလေငျးတဈယောကျ ဧညျ့သညျလာတာကိုသိပွီး အဝတျတှပွေနျဝတျထားမယျ ထငျလိုကျသညျ။ သူတို့နှဈယောကျအခနျးထဲရောကျတော့ ဝလေငျးက ကုတငျပျေါမှာ လီးတောငျလကျြ ကိုယျတုံးလုံးနဲ့ထိုငျနသေညျ။ “ဟယျ-အမလေး” ဆိုလှလှဌေး ပွနျထှကျသှားသညျ။ မိမိလညျး ဝလေငျးကိုစိတျဆိုးရအခကျဖွဈသှားသညျ။ “ဟဲ့–တကဲ့ခြာတိတျ လေးဘဲနျော–” နငျတကယျတျောတယျ မိရယျ– မလှတျစနေဲ့သိလား-ရအောငျခြိတျထား” လို့တိုးတိုးလေးပွောသညျ။ ပွီး ရီကြဲကြဲ နဲ့… “ငါ့လဲပေးစားပါဟယျ” လို့ကြောငျးတုံးကအတိုငျးပွောသညျ။
“နငျမနာလိုတော့မဖွဈနဲ့နျော–ငါတကယျပွောတာပါဟယျ” လို့ထပျပွောသညျ။ မိမိကသူ့ပါးစပျပေါကျကို ပိတျနိုငျအောငျ… “နငျ သဘောကရြငျလဲ သှားပွောကွညျ့” လို့ပွောလိုကျသညျ။ လှလှဌေးက ခနျးထဲဝငျသှားပွီး ခနအကွာပွနျထှကျလာသညျ။ပွီး.. “မငျး တပညျ့က-မငျးသဘောမပါရငျ– သူမနဘေူတဲ့-အလာကွီးနော– လိုကျပွောပါအုံး” လို့ပွောနသေညျ။ ဝလေငျးကလညျး စိတျထဲက နေ ယောကျြားလေးဘဲ မိနျးခလေးကစလာရငျ တှယျခငျြတာပေါ့လို့ပွောနသေညျ။ လှလှဌေးက.. “လာပွောပါအုံးဟယျ” ဆိုလကျ ဆှဲချေါလို့မိမိပါသှားသညျ။ အခနျးထဲရောကျတော့… “သား– ဒါဆရာမနဲ့သိပျခဈြတဲ့ သူငယျခငျြးဘဲ–သူနံမညျက လှလှဌေးတဲ့– သူက —မွို့ကဆရာမဘဲ–မငျးကို စိတျဝငျစားလို့တဲ့” လို့ပွောတော့ဝလေငျးက ငူတူတူပုံစံနဲ့… “မမခှငျ့ပွုတယျပေါ့” လို့ မေးသညျ။ မိမိက… “နပေေးလိုကျပါကှာ–တို့အပွငျကနေ စောငျ့ပေးမယျ” ဆိုတော့ ဝလေငျးလညျးအကှကျရသှားသညျ။ “နဆေို နမေယျလေ–ဒါမဲ့ ဆရာမပါ အခနျးထဲနရေမယျ” ဆိုဝလေငျးကပွောခလြိုကျသညျ။ လှလှဌေးက… “ရှမေိရယျ–မငျးခြာတိတျက လောဘကွီးတယျ ထငျတယျ” ဆိုရီပွီးပွောသညျ။ “ကဲပါ–ရှမေိရယျ-ကြောငျးတုံးကလိုပေါ့” လို့လှလှဌေးကပွောခလြိုကျသညျ။ ဝလေငျးက လီးတနျးလနျးနဲ့ထလာပွီး မိမိကိုဖကျကာ ကဈဆငျဆှဲတော့သညျ။ ပွီးဖငျလုံးအောကျကနခြေီပွီး မကာကုတငျဆီသှား တော့…
“ဟိတျ–မနိုငိရငျ-ပွုတျကမြယျ–ခပြါမောငျရယျ” လို့လှတျကနဲထှကျသှားသညျ။ လှလှဌေးက… “အလဲ့–ရှမေိတို့ကတော့-မောငျ တှပေါတှေ-ဖွဈကုနျပါလား” ဆို ပွောတော့သညျ။ ဝလေငျးမိမိကုတငျပျေါလညျး ရောကျရောထမီကို အတငျဆှဲခြှတျပွီ ဘာဂြာထပျ ကိုငျပွနျသညျ။ “အူးဟီး–အမလေး-အီး” နဲ့ မိမိအတျောကောငျးသှားသညျ။ ဝလေငျးက ဘာဂြာကိုငျရငျး မိမိအကြီတှကေိုပါ ဆှဲ ခြှတျနသေညျ။ ပေါငျကိုအတငျးတှနျးရငျး မိမိမွငျအောငျစောကျဖုတျကို လြာနဲ့ယကျပွသညျ။ “တျောပွီ-ယားတယျမောငျရဲ့” လို့ပွော တော့ ပေါငျကို လကျနဲ့တှနျးထားမွဲနဲ့ ရပျပွီးလှလှဌေးကို… “ဟိုဆရာမ-အဝတျတှခြှေတျင်ျပွးလာခဲ့လေ” လို့ချေါလိုကျသညျ။ လှလှ ဌေးက ကြောငျးတုံးကအတိုငျး ဗရုတျကခြငျြစိတျနဲ့… “ဟုတျကဲ့ပါမောငျရဲ့” လို့ပွောလို့မိမိရီ နသေညျ။ လှလှဌေးက အဝတျတှလေဲ ခြှတျပွီးရော… “ကမြလှရဲ့လာမောငျ” ကိုယျကိုတပါတျလှညျ့ပွသညျ။ ပွီးကုတငျနားကိုလာပွီး မိမိနို့တှကေို ကုနျးစို့ပေးနသေညျ။ ဝလေငျးက မိမိကိုဘာဂြာဆကျမှုတျရငျး လှလှဌေးဖငျကွားက စောကျဖုတျကို လကျထိုးထဲမှပေေးလိုကျသညျ။
“အူး-ဟေး မိရေ မငျးခြာတိတျက အလာကွီးဟ” ဆိုပွောသညျ။ “မောငျ-တို့အစကွေိ့မျးနပွေီ–ဌေးကို မှုတျပေးလိုကျပါ” လို့ ပွောသညျ။ အိမျထောငျကပြွီး သဘာရှိတဲ့ လှလှဌေးက ကိုယျတိုငျနရောခသြညျ။ ပကျလကျအနအေထားနဲ့ ဝလေငျးမကျြနှာနားသူ က ဖငျပေးခှသညျ။ မိမိကိုတော့ဝလေငျးလီးကို စုပျခိုငျးသညျ။ ပွီး “သားလေး–လြာဘဲထုတျထား–ငွိမျငွိမျနေ ဇကျနာသှားမှာစိုးလို့- တီခယျြဟာ တီခယျြလှုပျရှားမယျ” လို့ပွောသညျ။ပွီး လှလှဌေးကဖငျကို ခါကစားရငျး သူစောကျဖုတျကို ဝလေငျးလြာနဲ့ကို တိုငျ ပှတျသညျ။ မိမိကဝလေငျးလီးကို စုပျရငျး လှလှဌေးစောကျဖုတျကွီးနဲ့ ဝလေငျးလြာပှတျနတောကို စိုကျကွညျ့ရငျး ဖီးလျပိုတကျနရေ သညျ။ လှလှဌေးလညျး ဝလေငျးလြာနဲ့ စောကျဖုတျကိုထိလို့ ဖီးလျတကျကာ တအငျးအငျးနဲ့ညီးရငျး ဖငျကိုသှကျသှကျလေးခါ ကစား လာသညျ။ တခါတခါလှလှဌေးစောကျပတျက ဝလေငျးမကျြနှာကိုပှတျမိနသေညျ။ ဒါကွောငျ့ ဝလေငျး နှာခေါငျးနဖူးနဲ့ပါးတှမှော လှလှဌေးစောကျရညျတှေ ငပကြေံကုနျသညျ။ လှလှဌေးကလညျး သူ့သူငယျခငျြး ရှမေိလီးစုပျတာကို ကွညျ့ရငျး ဖီးလျအရမျး တကျနသေညျ။ ဝလေငျးလကျနှဈဖကျနဲ့ လှလှဌေးဖငျကိုမထားပွီး စောကျစိကို ပွှတျကနဲ ပွှတျကနဲ မွညျအောငျ စုပျလိုကျသညျ။
“အမလေးလေး–ကောငျးလိုကျတာကလေးရယျ–တီခယျြပွီးသှားပွီ အုအူးအီး–တျောလိုကျတာကှာ” ဆိုခှဆငျးသှားသညျ။ ပွီး လှလှဌေးက… “မိမိကို. တလှညျ့စီစုပျပေးလိုကျမယျ” ဆိုဝလေငျးလီးကွီးကိုငုံလိုကျသညျ။ လီးတဝကျလောကျနေ အပျေါအောကျ နှုတျခမျးနဲ့ ညှပွီးဖွေးဖွေးခငျြးဆှဲ င်ျထုတျပေးလာသညျ။ ဝလေငျးက လှလှဌေးပုလှကေို ကွိုကျသှားသညျ။ ပွီး နောကျတဈခကျြပွနျငုံ တော့ လီးတဆုံး အာခေါငျအတှငျးထိ ထိုးထဲ့ထားသညျ။ ဝလေငျးလီးမှေးတှနေဲ့ လှလှဌေးနှာခေါငျးတောငျ ဖိမိနသေညျ။ ပွီး ဖွေးဖွေးခငျြ ဆှဲထုတျပေးလာတော့… “အူးဟူး–တီခယျြ-သားပွီးသှားလိမျ့မယျ” လို့တောငျ ဝလေငျးပွောလိုကျရသညျ။ “ကောငျးလားသား– -ပွီးခငျြလညျး–တီခယျြပါးစပျထဲမှာပွီးလိုကျ” လို့လှလှဌေးကပွောလို့ မိမိအံ့အောသှားသညျ။ လှလှဌေးက လီးရညျတောငျမွိုခမြယျတဲ့လား ဆိုတှေးပွီး ဝလေငျးတော့ သူ့ကိုစှဲသှားရငျ ဒုက်ခလို့ပူလိုကျမိသညျ။ ဒီတဈခကျြပွနျငုံရာမှာလညျး လှလှဌေးက အာခေါငျထဲထိ ထိုးသှငျးပွီး ပွနျအထုတျမှာ ဝလေငျးဘယျလိုမှ ထိမျးမရဘဲ လီးရညျတှအောခေါငျထဲ ပနျးထှကျသှား သညျ။ လှလှဌေးက အလငျြမှီပုံမပကျြမွိုခနြလေသေညျ။ မိမိက လှလှဌေးကိုကွညျ့ပွီး သူက အိမျထောငျကဘြူးခဲ့တာကိုးလို့ တှေး မိသညျ။ တဆတျဆတျတှနျ့ရငျး ကောငျနတေဲ့ ဝလေငျးကိုကွညျ့ရငျး မိမိဘေးကနလှေဲကာ သှားဖကျလိုကျသညျ။ လှလှဌေးက လီး ထဲကထှကျလာတဲ့ လကျကနျြလီးရညျကို လြာနဲ့သပျယူတော့…
“အား–မရတော့ဘူး” ဆိုကုနျးထပွောသညျ။ ပွီး… “တျောပွီတီခယျြ-မထိနဲ့အရမျးယားတယျ- အရမျးလဲ ကောငျးတယျ” လို့ဝလေငျး ကပွောသညျ။ လှလှဌေးက ဝလေငျးအရှိနျမကသြေးတာမို့ ဝလေငျးနို့လေးတှကေို လြာနဲ့ထိုးယကျပေးရငျး ဝလေငျးကို အမောဖွေ ပေးနသေညျ။ မိမိက…“မောငျ–ဌေးစုပျတာ-တအားကောငျးလားဟငျ” .လို့မေးလိုကျသညျ။ ဝလေငျးက… “တကဲ့ပုလှေ expartဘဲ မမ” လို့ ပွောတော့မိမိက… “မငျးငါ့ခဈြကလေးကိုတော့–လုမသှားနဲ့နျော” လို့ပွောလိုကျတော့… “စိတျခပြါရှမေိရာ–ခနဘဲငှားမှာ ပါ” လို့ပွောရငျး မိမိနဲ့လှလှ ဌေးတို့ရီနကွေသညျ။ လှလှဌေးက ဝလေငျးတဈဖကျနခေေါငျးမော့ ပွီး ဝလေငျးကို ကဈဆငျဆှဲ နသေညျ။ ဝလေငျးအောကျနှုတျခမျးကို ပွုတျထှကျပါသှားလုမတတျ စုပျပွီး ဝလေငျးလြာကို သူ့လြာကွီးနဲ့ မြိုးစုံကလိပေးနသေညျ။ ဝလေငျးဆီက ညီးသံတောငျထှကျလာသညျ။ မိမိက သူတို့နမျးနတော ကိုကယျတခွမျးစောငျးကွညျ့ရငျ ဝလေငျးလီးပြော့ကွီးနဲ့ လီး မှေးတှကေို ပှတျဖှကစားပေးနသေညျ။ ဝလေငျးက အခုမှလှလှဌေး နဲ့ကဈဆငျရိုကျဖူးပွီး အတျောကြှမျးပါလားလို့ တှေးမိသညျ။ လှလှဌေးက သဝလေငျးပါးစပျနားကိုသူ့နို့ပို့ပွီး…
“တီခယျြကို–နို့စို့ပေးအုံး” လို့ပွောလိုကျသညျ။ ဝလေငျးက တဈဖကျလှညျ့ပွီး လှလှဌေးနို့တှကေို စို့ပေးနသေညျ။ လှလှဌေး ညီး သံလေးထှကျလာပွီး ဝလေငျအောကျဖကျကို ရှကေ့ာ ပုလှကေိုငျပေးပွနျသညျ။ ပွီး… “မိ-ခုနကိုလုပျသလို–မငျးကလှုပျရှား ပေးလိုကျ” လို့ပွောလာလို့ မိမိတဈယောကျ ဝလေငျးမကျြနှာနား ဖငျပေးကာခှ တကျလိုကျသညျ။ ဝလေငျးက လြာလေးထုတျထား ပေးပွီး လှလှဌေးကဖငျကို လှုပျရမျူကာ စောကျပတျနဲ့လြာကို ပှတျတော့သညျ။ ဒီတခါ လှလှဌေးက အာဂေါငျထဲထိ မထညျ့ဘဲ ဒဈကို သာ စုပျလိုကျဒဈနားက အသားနုလေးထိသာ နှုတျခမျးနဲ့ဆောငျ့လိုကျလုပျပွီး လီးကွီးကို ဗိုကျပျေါလှနျခကြာ တဆတျဆတျနဲ့ မနာ့တ နာသှားနဲ့ ကိုကျနသေညျ။ လီးကပွနျတောငျလာပွီး ထောငျလာသညျ။ လှလှဌေးက ဂှငျးထုပေးနရေငျး.. “မိမိ–လာသူငယျခငျြး -မငျး အပျေါကနလေိုကျ” “အူးဟူးဟူး–အို–အီးဟီး” နဲ့မိမိငွိမျကသြှားတော့သညျ။ ကိုယျတိုငျလှုပျရှားပွီး ကိုယျ့စိတျကွိုကျသလိုလုပျယူ လိုကျရလို့ မိမိအရမျးကောငျးသှားသညျ။ သူငွိမျနရောကနေ ခါးကိုဝိုကျကာ လှညျ့မိနရေငျး စောကျဖုတျထဲက အယားမပွဘေဲ ကောငျးနသေညျ။ လှလှဌေးလညျး ဖငျကိုခါရငျး ဝလေငျးလြာနဲ့စောကျစိကို ထိမိလှနျးလို့ စောကျဖုတျတဈခုလုံးယားပွီးအရသာတှေ့ နရှောသညျ။
“သားတီခယျြကို–ခုနလို–စုပျပဈလိုကျ” ဆိုဖငျကိုကွှပေးလိုကျသညျ။ ဝလေငျးကလညျး စောကျစိကို သူနှုတျခမျးထဲပါလာတဲ့အထိ ဖိ စုပျပဈလိုကျသညျ။ “အအ–အို–အီး-မလှတျနဲ့–အူး–ရှီး- ကောငျးလိုကျတာ ကလေးရယျ” ဆိုလှလှဌေးလညျး စောကျဖုတျကယား ပွီး အကွောတဈထောငျစိမျ့သှားရှာသညျ။ “အငျးဟငျး–မိ–ဖငျပွီးရငျ ကိုယျ့အလှညျ့ပေးအုံးကှာ” လို့လှမျးပွောသညျ။ မိမိလညျး ဘာဂြာအမှုတျခံရာကနေ လီးနားမှာသှားခှပွီး ဆောငျ့ခလြိုကျသညျ။ ဗွဈကနဲ နာကငျြမှုနဲ့ အကောငျးရောထှေးသှားသညျ။ မိမိက အတှအေ့ကွုံမရှိတော့ သူလုပျတတျသလိုဘဲ လှုပျရှားလိုကျသညျ။ လှလှဌေးက မိမိနရောကို ဝငျယူပွီး ဖငျကိုခါကာ စောကျပတျအ ယကျခံပွနျသညျ။ ဝလေငျးက ဘာမှမလှုပျရှားရပမေဲ့ လြာရောလီးရော အလုပျလုပျရနသေညျ။ မိမိစောကျရညျတှကေ ထိနျးမနိုငျ အောငျထှကျကလြာခဲ့သညျ။ ဆိုတောငျးဆိုလိုကျသညျ။,မိမိလညျး နှဈခြီဆကျတိုကျပွီးသှားပမေဲ့ အာမရသေး။ ဒါမဲ့လှလှဌေးကို အားနာပွီးဖယျပေးလိုကျသညျ။ ပွီးဝလေငျးဘေးမှာ လှဲအိပျကာဖကျ ပွီးနလေိုကျသညျ။ လှလှဌေးက ဝလေငျးပေါငျနှဈလုံးကို ဆှဲစိ လိုကျသညျ။ မိုပျေါထောငျနတေဲ့ ဝလေငျးလီးဒဈကွီးက ပိုတငျးပွီးကွီးလာသညျ။ ဒီအထာကိုသိတဲ့သူမို့ ပုံစံခလြိုကျခွငျးဖွဈသညျ။ ပွီးသူတကျခှကာ လီးကိုကိုငျပျွီး စောကျဖုတျဝမှာတပွေီ့း ဖွေးဖွေးခငျြး ထိုငျခသြှငျးလိုကျသညျ။
“အူးဟီး–ထိလိုကျတာကှာ–အမလေး–ကလေးငွိမျငွိမျနေ –တီခယျြလိုးမယျ–မလှုပျနဲ့” ဆိုတဘှတျဘှတျနဲ့ဆောငျ့နတေော့သညျ။ မိမိက လှလှဌေးစောကျဖုတျကွီးထဲ လီးကွီးဝငျထှကျနတောကို ကွညျ့ရငျး စောကျစိလေးကို လကျနဲ့ ပှတျဖီးလျယူနလေသေညျ။ ပှတျနရေငျး ယားပွီးပွီးသှားပွနျလို့… “အအ-အား-အငျးအီး” ဆိုတှနျ့လိနျနပွေနျသညျ။ လှလှဌေးလညျး ဝလေငျးရဲ့လြာအစှမျးနဲ့ ခံစားတာမို့ ပွီးခငျြလာလို့ အတငျးဖိဆောငျ့ရငျး.. “အမလေးလေး–ကောငျးလိုကျတာကှာ” ဆိုဝလေငျးကိုယျပျေါမှောကျကလြာ တော့သညျ။ မိမိက သူတို့နှဈယောကျရဲ့ကိုယျလုံးကွီးတှကေို ပူဖကျခှပွီး စောကျဖုတျထဲကယားတဲ့အရှိနျကို ညှောငျ့ရငျး ဖီးလျယူနေ တော့လသေညျ။ သူရဲ့ ပထမဆုံး ကာမအတှအေ့ကွုံမှာပငျ 3some အတှအေ့ထိနဲ့ အရသာထူးကဲနရေတော့သညျ။
ဒေါ်မိမိတစ်ယောက် မိုးအေးအေးနဲ့ကုတင်ပေါ်မှာ ဖုန်းလျောက်ပွတ်နေသည်။ အမှတ်မထင် အပြာစာပေများစုစည်းရာထဲ ဝင်ကြည့်လိုက်မိပြီး ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကို ဖတ်မိလိုက်သည်။ ဇာတ်လမ်းက ရုံးတစ်ရုံးကို အခြေခံပြီးယောကျာ်းနဲ့ မိန်းမနမ်းစုပ်ယက်တာတွေ ကိုင်တွယ်ပွတ်သပ်တာ တွေ တန်ဆာကိုစုပ်ယက်တာတွေ နည်းပေါင်းစုံနဲ့ ကာမစပ်ယှက်တာတွေကို ပစ်ပစ်နှစ်နှစ် သုံးနှုံးရေးထားတာ ဖတ်ရသည်။ စာရေးသူရဲ့ ရေးသားမှုက ဆွဲဆောင်မှုရှိလွန်းလို့ ဆက်ဖတ်ရင်း စောက်စိထဲကယာပြီးပြီးသွားလို့ ထမီပေါ်ကနေ စောက်စိကိုဖိပြီး ကာမအရသာကို ခံစားလိုက်ရသည်။
အထက်တန်းပြ အပျိုကြီးဆရာမ ဒေါ်မိမိတစ်ယောက် ခါတိုင်းစိတ်ထလို့ အာသာဖြေတာထက် ပိုကောင်းပါလားလို့ တွေးနေမိသည်။ အသက် ၃၀ သာရှိသေးတဲ့ အပျိုကြီးဆိုပေမဲ့ သွေးနဲ့ကိုယ်သားနဲ့ကိုယ်မို့ ကာမအရသာကိုတော့ ခံစားမြဲဖြစ်သည်။ ဇာတ်လမ်းကို ဆက်ဖတ်ရင်းထမီထဲ လက်လျှိုကာ စောက်ဖုတ်ကိုဖွဖွလေးပွတ်ရင်း ဖီးလ်ဆက်ယူလိုက်သည်။ ဇာတ်လမ်းကလည်း ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဖွဲ့နွဲ့ပုံကလည်း ကောင်းလွန်လို့ စိတ်တွေအကြွဆုံးဖြစ်နေရသည်။
“ဆရာမ-” ဆရာမနဲ့ခေါ်သံကြားမှ သူအချိန်ပိုသင်ပေးဘို့ ခေါ်ထားတဲ့ဝေလင်းကို သတိရသွားလို့ ထမီးဝတ်ကာ တံခါးသွားဖွင့် ပေးလိုက်သည်။ ပြန်အလှည့်မှာတော့ ဆရာမထမီမှာ ကွက်နေတာကို ဝေလင်းမြင်သွားပြီး ထူးဆန်းနေသည်။ ဆရာမစိတ်ပါပြီး ကွက်နေတာ ဘာကြောင့်ပါလိမ့်လို့လည်း တွေးမိလိုက်သည်။ စာသင်တော့လည်း ဆရာမအသံက တုန်ပြီးခြောက်ကပ်နေသည်။ မျက်လုံးကလည်း ခါတိုင်းနဲ့မတူဘဲ ဆင်းနေသည်။ ဝေလင်းစာသင်နေတာကို စိတ်မရောက်ဘဲ ဆရာမအကြောင်းဘဲ စဉ်းစားနေ မိသည်။ ဒါကြောင့်… “ဆရာမ–ဘာဖြစ်နေလို့လဲ– သားကိုစာသင်တာ–ဒီနေ့တမျိုးကြီးဘဲ” လို့ပြောတော့ မိမိသူပြောင်းလဲနေတာ ကို ဝေလင်းသိပါလားဆို လန့်သွားတုံး တဆက်တည်းဝေလင်းက… “ဆရာမထမီနောက်မှာလည်း ကွက်နေတယ်” ပြောလိုက်လို့ မျက်နှာကြီးနီရဲသွားတော့သည်။
“ဆရာမချစ်သူရောက်နေရင်လည်း သားပြန်လိုက်မယ်” လို့ဆက်ပြောတော့ ပိုဆိုးကုန်တော့သည်။ “ဟင့်အင်း ဆရာမမှာ–ချစ်သူမ ရှိဘူး” လို့ချက်ချင်းပြန်ပြောလိုက်သည်။ ဒါမဲ့ သူအဲ့လိုပြောပြီးခနအကြာ ဒီကောင်လေး ငါစိတ်ကြွနေလို့ အရည်ထွက်ပြီးကွက်နေ တာကို သိပါလားလို့တွေးမိပြီး ရှက်နေတော့သည်။“ကဲ မင်းကြည့်ရတာလည်း စာထဲစိတ်မပါသလိုဘဲ ဒီနေ့ဒါလောက်ဘဲပေါ့နော်” ပြောအပြီးဝေလင်းစာအုပ်တွေထဲ့နေတုံး မိုးက သဲသဲမဲမဲရွာချလာတော့သည်။ “မိုးတိတ်မှဘဲ ပြန်တော့” လို့ပြောပြီး မိမိအိမ်သာ ထဲသွားပြီး စောက်ဖုတ်ကို ရေဆေးလိုက်သည်။ ဝေလင်းဧည့်ခန်းဆက်တီမှာ ထိုင်ပြီးဂိမ်းဆော့နေသည်။ မိမိလည်း ခပ်တည်တည်နဲ့ သူမျက်နှာချင်းဆိုင်မှာ ထိုင်ပြီးအပြာစာပေထဲက နောက်တစ်ပုဒ်ကို ဆက်ဖတ်ဖို့ဖွင့်လိုက်သည်။ ချစ်တဲ့ဆရာမဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ဖြစ် ပြီး တပည့်နဲ့ဆရာမ အပြာဇာတ်လမ်းဖြစ်နေသည်။ သူဒင့်ဖြင့် ဇာတ်လမ်းကိုပြောင်းဘို့ လုပ်ပေမဲ့ စာသားက ဆွဲဆောင်နေလို့မ ပြောင်းဘဲ ဆက်ဖတ်နေမိသည်။ ပေါင်ခြံမှာ နွေးကနဲစီကျလာတာသိလိုက်ပြီး စောက်စိကကြင်လာသည်။ သူထိမ်းမရဘဲ ခန္ဓာကိုယ် တွန့်လိန်ကာ အင်းဟင်းဆို ညီးမိလိုက်သည်။ ဝေလင်းမျက်လုံးက သူဆီရောက်လာပြီး ကြည့်တဲ့အကြည့်က သူဖီးလ်တက်သွား တယ်ဆိုတာ သိတဲ့ပုံရပြီး ထလာကာ.. “ဆရာမရယ် သားသိတယ်”
ဆိုပြီးဆွဲထူကာ ဖက်ထားသည်။ မိမိလည်း ကာမအရှိန်မကုန်သေးဘဲ ဝေလင်းဖက်ထားတာကိုက တမျိုးပိုကောင်းနေရှာသည်။ ဝေ လင်းက မိမိနှုတ်ခမ်းလေးကို ဖွဖွလေးစုပ်နမ်းတော့ မိမိနှုတ်ခမ်းလေးတဆတ်ဆတ်တုန်နေရှာသည်။ ဝေလင်းပုဆိုးအောက်က တောင်လာတဲ့လီးက ပေါင်ခွမှာလာထောက်ပြန်တော့ မိမိဒူးပင်မခိုင်တော့လို့ ဝေလင်းကို အတင်းပြန်ဖက်ထားရသည်။ တကိုယ်လုံး တုံရီနေရင်း အသံတုန်တုန်နဲ့.. “သားရယ် ဧည့်ခန်းထဲမှာကွာ” လို့ပြောတော့ ဝေလင်းကခါးကနေဖက်ပြီး အိပ်ခန်းထဲခေါ်သွားသည်။ အခန်းထဲရောက်တော့လည်း ဖက်ပြီးနှုတ်ခမ်းကို နမ်းပြန်သည်။ ဝေလင်းကနမ်းရင်း မိမိထမီးကို ဖြေချွတ်လိုက်လို့မိမိလန့်သွား ပြီး… “သားကလဲကွာ” ဆိုပြန်ကောက်တော့ ခြေနဲ့နင်းထားကာ ပြန်ဆွဲထူသည်။ မိမိတကိုယ်လုံးထူပူသွားပြီး က်ဖေုတ်ကို လက်နဲ့ အုပ်ထားသည်။ ဝေလင်းက နမ်းနေရင်းကုတင်ဆီကို တွန်းပို့ကာ ကုတင်စောင်းမှာ တွန်းလှဲပြီး တက်ခွသလိုအနေအထားနဲ့ နှုတ်ခမ်း ကို ဆက်နမ်းနေသည်။ မိမိကတစ်ချက်ချက် ပြန်စုပ်နမ်းနေသည်။ ဝေင်းလင်းက အိမိအကျီကြယ်သီးတွေကို ဖြုတ်ပြီးနို့တွေကို စို့ ပေးနေပြန်သည်။
“အားလားလားသားရယ်–တို့ခေါင်းတွေမူးလာပြီ-ရွှီး-အို” နဲ့ညီးနေတုံးဝေလင်းက စောက်ဖုတ်ကို ကုန်းယက်ပြန်သည်။ “အီး-မ လုပ်နဲ့-မလုပ်နဲ့” လို့မိမိကတာပေမဲ့မရပါ။ ဝေလင်းလျာက စောက်ဖုတ်ပေါ်မှာ အထက်အောက် စုံချီဆန်ချီပြေးလွှားနေသည်။ “အီး ဟီး–အရမ်းဆိုးတယ်ကွာ- ဆရာမကြောက်တယ်–အီး” နဲ့ပြောနေတုံးဝေလင်းလက်က နို့သီးခေါင်းလေးနှစ်ကို ကိုင်ကစားပေးနေပြ နိသည်။ မိမိတအားကို ကောင်းနေပြီးခေါင်းကို ခါယမ်းနေရှာတာ ဆံပင်တွေတောင် ရှုပ်ထွေးကုန်လာသည်။ ကာမပန်းတိုင်ဆီ ရောက်တိုင်း ကော့ကော့ပေးရင်း တရွှီးရွှီးနဲ့ညီးနေရှာသည်။ မျက်နှာကနီရဲပြီး အဆီပြန်နေရှာသည်။“တော်ပြီတော်ပြီ–တို့-တအား မောနေပြီ” ပြောမှဝေလင်းရပ်လိုက်သည်။ မိမိမျက်စိမှိတ်ကာ နဖူးပေါ်လက်တင်ပြီး တအင်းအင်းတိုးတိုးလေး ညီးနေသည်။ ဝေ လင်းကတော့ သူဆရာမစောက်ဖုတ်ကြီးကို မျက်တောင်မခတ်ဘဲ ကြည့်နေသည်။ စောက်မွှေးပါးပါးလေးအောက်က စောက်စိလေး က သေးပေမဲ့ ပြူထက်နေလို့ သှူုဆရာမလက်နဲ့ အာသာဖြေနေတာမနဲပါလားလို့ တွေးနေသည်။ စောက်ဖုတ်ဘေး နှုတ်ခမ်းသားပါး ပါလေးကြားမှာ အရည်တွေနဲ့ လဲ့နေတဲ့အတွင်းသား ပန်နုရောင်နဲ့အနီရောနေတဲ့ အသားနုလေးတွေဖြစ်သည်။ မိမိအမောဖြေပြီးမှ သူစောက်ဖုတ်ကို ဝေလင်းကြည့်နေတော့မှာဘဲဆိုတဲ့ အသိဝင်ပြီးလက်နဲ့လှမ်းဖုံးကာ မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်တော့ ဝေလင်းကပြုံးပြီး….
“ဖုံးမနေပါနဲ့ ဆရာမရယ်– သာသေချာ- ကြည့်ပြီးသွားပြီ” လို့ပြောသည်။ မိမိကလူဆိုလေးဆိုထထိုင်ပြီး ဖက်လိုက်သည်။ ပုဆိုး အောက်ကနေတောင်နေတဲ့ ဝေလင်းလီးက မိမိပါးဘေးကို လာထောက်နေသည်။ “ဒီတခါ–ဆရာမကြည့်အလှည့်” ဆိုပြောပြီးဝေ လင်းပုဆိုးကို ဖြေချလိုက်သည်။ ဒစ်ပြဲပြဲကြီးနဲ့ ဝေလင်းလီးတုတ်တုတ်ကြီးကို မိမိတွေ့လိုက်သည်။ သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ ရင်နှီးခင်မင်မှုက ခါတိုင်းထက်ပိုသွားသည်။ မိမိက သူဖတ်ဖူးတဲ့ အပြာဇာတ်လမ်းထဲကအတိုင်း ဝေလင်းလီးကို ငုံစုပ်ပေးလိုက်တော့သည်။ “ကန်တော့နော် ဆရာမ” လို့ ဝေလင်းကပြောတော့ ကိစ္စမရှိ ကြောင်း မိမိကလက်ကာပြကာ ဆက်စုပ်ပေးနေသည်။ ဇာတ်လမ်းထဲ ကပါသလို လီးထိပ်ကို လျာနဲ့ထိုးလိုက် လီးကို နှုတ်ခမ်းနဲ့ညှပ်ဆွဲလိုက် လုပ်တော့ ဝေလင်းခါးကော့ ခြေဖျားထောက်ကာ ညီးသံထွက် လာသည်။ ဒါကို မိမိကသဘောကျပြီး သူအပြာစာဖတ်ခဲ့တဲ့အကျိုးဆိုပြီး တွေးမိကာ ဆက်စုပ်ပေးနေသည်။ ဝေလင်းစိတ်တအား ပါလာပြီး…
“လိုးချင်တယ်–ဆရာရယ်” ဆိုတော့ “သားကလည်းကွာ–အဲ့လိုကြီးမပြောနဲ့လေ” လို့ပြောပြီးဝေလင်းဗိုက်ကို ခေါင်းစောင်းကပ် ကာ ဖက်ထားသည်။ ပြီး.. “သား–ဆရာမအဲ့လောက်ထိ–မစွန့်စားရဲဘူးကွာ” လို့ပြောသည်။ ဝေလင်းက.. “သား–အပြင်မှာပြီးမှာ ပါ” ဆိုတော့မိမိက.. “အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူး– ဆရာမနဲ့တပည့်–မသင့်တော်ဘူး ထင်လို့ပါ” ပြောသည်။ ဝေလင်းလည်း တအားတင်နေ ပြီးမို့… “ဆရာမနဲ့– သားနှစ်ယောက်ထဲ–သိတာဘဲဗျာ” လို့ပြောသည်။ မိမိက ပြုံးပြီး… “သားနှုတ်လုံမယ်ပေါ့လေ” လို့ဆက် ပြောသည်။ ဝေလင်းခေါင်းညိမ့်ပြတော့ ဝေလင်းကိုယ်ကြီးကို အတင်းဖြစ်ညှစ်ပြီး သဘောသဘောဆိုကာ ကုတင်စောင်းမှာဘဲ ပက်လက်လှန်အိပ်ချလိုက်သည်။ အပြာဇာတ်လမ်းထဲက ကုတင်စောင်းမှာ သိပ်ကောင်းတယ်ဆိုတာကို မိမိသတိရလိုက်သည်။ ဝေ လင်းက ဒူးနှစ်ဖက်ကို လက်နဲ့ဆွဲမြှောက်တော့မိမိက…“ဖြေးဖြေးတော့လုပ်နော်– ဒါတို့အတွက်– first timeမို့ပါ” လို့ပြောသည်။ ဝေလင်းကလီးကို စောက်ဖုတ်ဝမှာတေ့ပြီး ဖြေးဖြေးလေးထိုးသွင်းနေသည်။ ဒစ်ကျွံဝင်အပြီးမိမိ ဆီက… “အီးဟီး-သားရယ်– ဖြေးဖြေး” ဆိုလက်နဲ့တားထားသည်။ ဗြစ်ကနဲဝင်သွားတော့ မိမိစောက်ဖုတ်ကယားပြီး… “အမလေး” ဆိုတစ်ချက်အော်ကာတွန့် သွားသည်။ လက်နဲ့တောင် ထဲ့အဆောင်မခံဘူးတဲ့ မိမိတစ်ယောက် သူ့စောက်ဖုတ်ကျင်းကျင်းလေးထဲ လီးတစ်ချောင်းလုံ အပြည့် ဝင်တော့နဲနဲတော့ နာသလိုခံစားရလိုက်သည်။ ပြည်နှက်နေပါလားဆိုတဲ့ အသိဝင်နေတုံး ဘွတ်ဘွတ်ဘွတ်နဲ့အဆောင့်ခံရ တော့သည်။
“အီး–အီး–အိုး”နဲ့အံကြိတ်ရင်း မိမိကောင်းသလိုရှိလာသည်။ လီးဒစ်လုံးကြီးရဲ့ စောက်ဖုတ်အတွင်းသားတွေကို ပွတ်ဆွဲတဲ့ အထိအတွေ့ကြောင့် သူတကိုယ်လုံးကြင်ပြီး အထွဋ်အထိပ်ရောက်သွားခဲ့သည်။ “အီး–အီးဟီး–ကောင်းလိုက်တာကွာ” ဆိုတ ဆတ်ဆတ်တုံနေရှာသည်။ ဝေလင်းက မနားတမ်တဘွတ်ဘွတ်နဲ့ ဆက်တိုက်ဆောင့်နေလေသည်။ “အီး–သားရယ်-တို့ကောင်းနေ ပြန်ပြီး–လုပ်လုပ်-ဆောင့်ပါ-လုပ်ပါ–လိုးပါကွာ” ဆိုအတားအဆီးမဲ့စကားတွေ ထွက်လာတော့သည်။ မိမိကောင်းနေတုံး ဝေလင်း ကဗြွတ်ကနဲလီးကို ဆွဲထုတ်ကာဂွင်းထုရင်းလီး ရည်တွေ ပန်းထုတ်နေတော့သည်။ ဒါကိုမျက်လုံးလေးစင်းပြီး မိမိကြည့်နေရှာသည်။ ပြီးမှ ဝေလင်းက သူ့ဆရာမအပေါ် မှောက်အိပ်ပြီးပါးတွေကို နမ်းကာ… “လိုးအုံးမှာနော်” လို့ပြောတော့မိမိက… “တနေကုန်လိုး” လို့ရင်းရင်းနှီးနှီးပြန်ပြောသည်။
“ကဲထအုံး–တို့ရှုးပေါက်ပြီး–ရေဆေးအုံးမယ်”် လို့ ပြောပြီးထမီကိုကောက်ကိုင်လို့ ဝေလင်းက ပြန်လုထားသည်။ ဖင်ပြောင် ပြောင်နဲ့ ထွက်သွားတဲ့ သူ့ဆရာဖင်ကိုကြည့်ရင်း အတော်ဂျောကောင်းပါလားလို့ တွေးမိလိုက်သေးသည်။ ဝေလင်းလည်း ရေဆေး ပြီးပြန်လာရော မိမိက ဝေလင်းလီးကို လက်နဲ့ဖြဲကြည့်ကာ… “မှိုကြီးအတိုင်းဘဲနော်”် လို့အပျိုဖျမ်းလေးတစ်ယောက်လေသံနဲ့ ပြောလေသည်။ ဝေလင်းက မိမိရဲ့အကျီနဲ့ ဘရာစီယာကိုပါ ချွတ်ပေးပြီး သူ့စွပ်ကျယ်ပါချွတ်လိုက်သည်။ “ဟေ့ခုန–သူပြီးတော့– လက့်နဲ့လုပ်တာ–ယောကျာ်းလေးတွေ–ဂွင်းထုတယ်–ဆိုတာလား” ဆိုပြုံးပြီးမေးသည်။ ဝေလင်းက.. “ဟုတ်တယ”် လို့ပြော ပြီး…. “မိန်းခလေးတွေလက်နဲ့ပွတ်– အာသာဖြေတာ ဘယ်နေရာလဲ ဆရာမ” အပြင်မှာမိုးကဝုန်းဒိုင်းကြဲလာပြန်သည်။ ကုတင်ပေါ် မှာ ခြေစင်းပြီးကားထိုင်နေတဲ့ ဝေလင်းပေါင်နှစ်ခုကြားကို မိမိက ဝင်တိုးထိုင်ပြီးမှီထားသည်။ ဝေလင်းလက်တွေက မိမိကိုဖက်ထား ရင်း နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို လက်နဲ့ပစားပေးနေသည်။
“တို့ကို-သူဘယ်နေရာကိုင်ကိုင်–ကောင်းတယ် သိလားလို့” ဆရာမအပျိုကြီးက အပျိုပေါက်စလေးလို လေသံနဲ့ပြောနေလေ သည်။ သူလက်နောက်ပြန်နဲ့ ဝေလင်းလီးပျော့ကြီးကို ကိုင်စွ ပေးနေသေးသည်။ပြီး.. “မင်းက–တို့ကိုဆရာမလို့–မခေါ်ဘဲ မမလို့ဘဲ ခေါ်တော့နော်– တို့ကတော့ ကြိုက်သလိုခေါ်မယ်– ဟုတ်ပြီလား” ဆိုတော့ဝေလင်းက… “မမ–မမ–မမ” လို့ခေါ်တော့ အပျိုကြီး မိမိက… “ရှင့်” ဆိုထူပြီးရီလိုက်ကြသည်။ ပြီးဝေလင်းရဲ့ ဘယ်ဘက်လက်မောင်းဘက်ကနေ ခေါင်းတခြမ်းစောင်းပြီး ဝေလင်းကို မိမိက ကစ်ဆင်ဆွဲတော့သည်။ ဝေလင်းက သူလျာလေးကို မိမိပါးစပ်ထဲထဲ့ပြီး လျာခြင်းကလိပေးလိုက်သည်။ နိုသီးခေါင်းတွေကို စွ နေတဲ့လက်တဖက်ကို မိမိပေါင်ကြားဆီပို့ပြီး စောက်စိလေးကို ပွတ်ပေးလိုက်သည်။
“အို–ကလေးရယ်–မမအရမ်းကောင်းတယ်ကွာ” လို့တိုးတိုးလေးပြောလာသည်။ ဝေလင်းလီးလည်း မာစပြုနေပြီးဖြစ်သည်။ “ကလေးရယ်–မမဘာဂျာ–လိုချင်တယ်” လို့တောင် တောင်းဆိုလာတော့သည်။ ဝေလင်းက လျာနဲ့ မိမိစောက်ဖုတ်အတွင်းသား လေးတွေကို ထိုးပေးလိုက်သည်။ စောက်ရည်အရည်ခဲလေးက ဝေလင်းလျာမှာကပ်ပါသွားသည်။ “အို–မောင်ရယ်–တအားကောင်း လှချည့်လာကွယ်–ချစ်တယ်မောင်” ဆိုချွဲပစ်တဲ့အသံလေးနဲ့ပြောလာသည်။ ဝေလင်းက စောက်ဖုတ်ဘေးသားလေး နှစ်ခုကို ပါးစပ်ထဲမြုပ်ပါလာအောင် စုပ်ယူလိုက်သည်။ “အူးရွှီး–အားလားလား–မောင်က တအားတော်တာဘဲကွာ– တို့ကောင်း အောင် လုပ်ပေးတတ်တယ်– အင်းဟင်း” ဆိုမိမိဖင်ကြီးကြွတက်လာသည်။ မိမိက သူ့လက်နဲ့နို့အုံတွေကို ပွတ်နေလို့ ဝေလင်း လက်နဲ့ လှမ်းပွတ်ပေးလိုက်သည်။ပြီး.. “မမ-ပြီးအောင် မောင်စောက်စိကို လုပ်ပေးမယ်” ဆိုတော့.. “အင်း” လို့မိမိက ပြန်ပြောသည်။ ဝေလင်းက လျာနဲ့စောက်စိထိတယ်ဆိုယုံဘဲထိပြီး ဝိုက်ယက်ပေးလိုက်သည်။ မိမိရင်ဘတ်ကြီး မောက်လာလိုက် ပြန်ကြသွားလိုက်ဖြစ်နေသလို ဗိုက်ကလည်း ဖေါင်းလာလိုက်ပြန် ချပ်သွားလိုက်နဲ့ ခါရမ်းနေတော့သည်။
“မောင်ရယ်–ကောင်းလိုက်တာ-တို့အရမ်းကောင်းတယ် မောင်ရယ်-ရွှီး–ကျွတ်ကျွတ်” နဲ့ဆက်တိုက်ညီးရင်းပြောနေသည်။ မိမိခြေ တဖက်က လီးကြီးကို လိုက်စမ်းပြီးပွတ်နေသည်။ “မောင်ရေ–တို့ပြီးချင်နေပြီကွာ–အတင်းဖိစုပ်လိုက်” လို့ပြောလာသည်။ ဝေ လင်းလဲနှုတ်ခမ်းကို စူပြီးစုပ်ပစ်လိုက်သည်။ “အူးရွှီး-အမလေးလေး–အီး–အို့ဟိုး–ကောင်းလိုက်တာမောင်” ဆိုမိမိကာမအရသာ ထူးကို ရသွားတော့သည်။ စောက်ဖုတ်ဝက အရည်တွေထွက်ကျလာလို့ ဝေလင်းစုပ်ယူလိုက်သေးသည်။ မိမိက ဝေလင်းကိုဆွဲဖက် ပြီး ကိုယ်ပေါ်တင်ကာ ဖက်ထားသည်။ လီးကစောက်ဖုတ်ဝမှာ တေ့နေတာတာ ဝေလင်းထိုးသွင်းလိုက်သည်။ လီးတဝက်လောက် ဝင်နေပြီး မိမိမှိန်းနေသည်။ “မောင်ရယ်-တို့ပြီးနေတာ- မောင့်လီးကြီးထိုးထဲ့တော့– ပိုကောင်းတယ်” လို့ပြောလိုက်သေးသည်။ “မမ-အရည်တွေတအားထွက်တယ်နော်” လို့ပြောလိုက်တော့…. “ကောင်းတာကိုမောင်ရဲ့” လို့မိမိကပြန်ပြောသည်။
“မောင်–လိုးတော့လေကွာ” ဆိုပေါင်ကားပြီးခြေမြှောက်ပေးလိုက်သည်။ “ရွှေမိရေ-ရွှေမိ” ရေဆိုလှလှဌေးခေါ်သံက မိမိအတွက် ငှက်ဆိုးထိုးတဲ့အသံလိုဖြစ်နေသည်။ မိမိက “ရှုး–တိုးတိုးနေနော်” အဝတ်တွေကမန်းကတန်းဝတ်ပြီး အခန်းထဲက ပြေးထွက်သွား သည်။ အဝတ်အစားက ကပိုကရိုဖြစ်သည့်အပြင် ဆံပင်တွေလည်း ပွနေတာမြင်လို့ လှလှဌေးက မိမိကိုကြည့်ပြီး အံ့အောသွား သည်။ အမြဲတန်း သပ်သပ်ရပ်ရပ်နေတတ်သည့်မိမိကို လှလှဌေးထူစမ်းနေပြီး… “ဟဲ့-နင်ဘယ်လိုပုံ ဖြစ်နေတာလဲဟ” လို့ပြော တော့ မိမိကိုယ့်ကိုယ်ကို မလုံဖြစ်သွားသည်။ အောက်ပိုင်းမိုးရေတွေစိုနေတဲ့ လှလှဌေးက ခါတိုင်းလိုဘဲအပိုပါလာတဲ့ အဝတ်တွေလဲ ဘို့ မိအိအိပ်ခန်းကိုဝင်လဲဘို့ လုပ်တော့မိမိကဆွဲထားပြီး… “ဧည့်သည်ရောက်နေလို့” လို့ပြောလိုက်မိတော့သည်။ လှလှဌေးက မျက်လုံးပြူးသွားပြီး… “ဟယ်–နင်စွံနေပြီကို-“ လို့ပြုံးရင်းပြောသည်။ ပြီးလှလှဌေးရေချိုးခန်းထဲသွားပြီး အဝတ်လဲနေသည်။ မိမိ ပထမတော့ ရှက်သွားပြီးနောက်ပိုင်းမှ ဘီးအီးဒီတက်စဉ်က သူတို့နှစ်ယောက်အပြန်အလှန်နမ်းရှုံ့ပြီး ကဲခဲ့ကြတာဘဲဆိုပြီး စိတ်ဖြေ လိုက်သည်။ သူတို့က ပြောမနာဆိုမနာ တစ်ယောက်အကြောင်း တစ်ယောက်သိသူများလည်း ဖြစ်ကြတာကိုတွေးပြီး စိတ်သက်သာ ရာရသွားသည်။ နောက်သူကလည်း အိမ်ထောင်ကွဲမို့ နာလည်ပြီး ရှက်စရာမရှိဘူးလို့ပါ တွေးလိုက်သည်။ ရေချိုးခန်းထဲက လှလှ ဌေးထွက်လာတော့..
“မင်းက စိုပြေတဲ့ဘဝရောက်နေပြီပေါ့လေ–ငါကတော့ နေပူထဲ ချောက်ကပ်နေတဲ့ဘဝပါ” လို့ညှိုးငယ်စွာန ပြောလာသည်။ ဒီလိုဆို တော့လည်း မိမိက လှလှဌေးကိုသနားသွားပြန်သည်။ ပြီး “ငါ့ကို မိတ်ဆက်ပေးလေဟယ်” လို့ဆိုပြီးပြောလာသည်။ အဲ့ဒီကျမှ မိမိ က တပည့်လေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောပြလိုက်သည်။ “နင်ပြောတာနဲ့ငါတောင် စိတ်ဝင်စားသွားပြီဟယ်” လို့ပြောလာသည်။ လှလှ ဌေးက အိပ်ခန်းထဲဝင်တော့ မိမိမတားတော့ပါ။ ဝေလင်းတစ်ယောက် ဧည့်သည်လာတာကိုသိပြီး အဝတ်တွေပြန်ဝတ်ထားမယ် ထင်လိုက်သည်။ သူတို့နှစ်ယောက်အခန်းထဲရောက်တော့ ဝေလင်းက ကုတင်ပေါ်မှာ လီးတောင်လျက် ကိုယ်တုံးလုံးနဲ့ထိုင်နေသည်။ “ဟယ်-အမလေး” ဆိုလှလှဌေး ပြန်ထွက်သွားသည်။ မိမိလည်း ဝေလင်းကိုစိတ်ဆိုးရအခက်ဖြစ်သွားသည်။ “ဟဲ့–တကဲ့ချာတိတ် လေးဘဲနော်–” နင်တကယ်တော်တယ် မိရယ်– မလွတ်စေနဲ့သိလား-ရအောင်ချိတ်ထား” လို့တိုးတိုးလေးပြောသည်။ ပြီး ရီကျဲကျဲ နဲ့… “ငါ့လဲပေးစားပါဟယ်” လို့ကျောင်းတုံးကအတိုင်းပြောသည်။
“နင်မနာလိုတော့မဖြစ်နဲ့နော်–ငါတကယ်ပြောတာပါဟယ်” လို့ထပ်ပြောသည်။ မိမိကသူ့ပါးစပ်ပေါက်ကို ပိတ်နိုင်အောင်… “နင် သဘောကျရင်လဲ သွားပြောကြည့်” လို့ပြောလိုက်သည်။ လှလှဌေးက ခန်းထဲဝင်သွားပြီး ခနအကြာပြန်ထွက်လာသည်။ပြီး.. “မင်း တပည့်က-မင်းသဘောမပါရင်– သူမနေဘူတဲ့-အလာကြီးနော– လိုက်ပြောပါအုံး” လို့ပြောနေသည်။ ဝေလင်းကလည်း စိတ်ထဲက နေ ယောကျာ်းလေးဘဲ မိန်းခလေးကစလာရင် တွယ်ချင်တာပေါ့လို့ပြောနေသည်။ လှလှဌေးက.. “လာပြောပါအုံးဟယ်” ဆိုလက် ဆွဲခေါ်လို့မိမိပါသွားသည်။ အခန်းထဲရောက်တော့… “သား– ဒါဆရာမနဲ့သိပ်ချစ်တဲ့ သူငယ်ချင်းဘဲ–သူနံမည်က လှလှဌေးတဲ့– သူက —မြို့ကဆရာမဘဲ–မင်းကို စိတ်ဝင်စားလို့တဲ့” လို့ပြောတော့ဝေလင်းက ငူတူတူပုံစံနဲ့… “မမခွင့်ပြုတယ်ပေါ့” လို့ မေးသည်။ မိမိက… “နေပေးလိုက်ပါကွာ–တို့အပြင်ကနေ စောင့်ပေးမယ်” ဆိုတော့ ဝေလင်းလည်းအကွက်ရသွားသည်။ “နေဆို နေမယ်လေ–ဒါမဲ့ ဆရာမပါ အခန်းထဲနေရမယ်” ဆိုဝေလင်းကပြောချလိုက်သည်။ လှလှဌေးက… “ရွှေမိရယ်–မင်းချာတိတ်က လောဘကြီးတယ် ထင်တယ်” ဆိုရီပြီးပြောသည်။ “ကဲပါ–ရွှေမိရယ်-ကျောင်းတုံးကလိုပေါ့” လို့လှလှဌေးကပြောချလိုက်သည်။ ဝေလင်းက လီးတန်းလန်းနဲ့ထလာပြီး မိမိကိုဖက်ကာ ကစ်ဆင်ဆွဲတော့သည်။ ပြီးဖင်လုံးအောက်ကနေချီပြီး မကာကုတင်ဆီသွား တော့…
“ဟိတ်–မနိုငိရင်-ပြုတ်ကျမယ်–ချပါမောင်ရယ်” လို့လွှတ်ကနဲထွက်သွားသည်။ လှလှဌေးက… “အလဲ့–ရွှေမိတို့ကတော့-မောင် တွေပါတွေ-ဖြစ်ကုန်ပါလား” ဆို ပြောတော့သည်။ ဝေလင်းမိမိကုတင်ပေါ်လည်း ရောက်ရောထမီကို အတင်ဆွဲချွတ်ပြီ ဘာဂျာထပ် ကိုင်ပြန်သည်။ “အူးဟီး–အမလေး-အီး” နဲ့ မိမိအတော်ကောင်းသွားသည်။ ဝေလင်းက ဘာဂျာကိုင်ရင်း မိမိအကျီတွေကိုပါ ဆွဲ ချွတ်နေသည်။ ပေါင်ကိုအတင်းတွန်းရင်း မိမိမြင်အောင်စောက်ဖုတ်ကို လျာနဲ့ယက်ပြသည်။ “တော်ပြီ-ယားတယ်မောင်ရဲ့” လို့ပြော တော့ ပေါင်ကို လက်နဲ့တွန်းထားမြဲနဲ့ ရပ်ပြီးလှလှဌေးကို… “ဟိုဆရာမ-အဝတ်တွေချွတ်င်္ပြးလာခဲ့လေ” လို့ခေါ်လိုက်သည်။ လှလှ ဌေးက ကျောင်းတုံးကအတိုင်း ဗရုတ်ကျချင်စိတ်နဲ့… “ဟုတ်ကဲ့ပါမောင်ရဲ့” လို့ပြောလို့မိမိရီ နေသည်။ လှလှဌေးက အဝတ်တွေလဲ ချွတ်ပြီးရော… “ကျမလှရဲ့လာမောင်” ကိုယ်ကိုတပါတ်လှည့်ပြသည်။ ပြီးကုတင်နားကိုလာပြီး မိမိနို့တွေကို ကုန်းစို့ပေးနေသည်။ ဝေလင်းက မိမိကိုဘာဂျာဆက်မှုတ်ရင်း လှလှဌေးဖင်ကြားက စောက်ဖုတ်ကို လက်ထိုးထဲမွှေပေးလိုက်သည်။
“အူး-ဟေး မိရေ မင်းချာတိတ်က အလာကြီးဟ” ဆိုပြောသည်။ “မောင်-တို့အစေ့ကြိမ်းနေပြီ–ဌေးကို မှုတ်ပေးလိုက်ပါ” လို့ ပြောသည်။ အိမ်ထောင်ကျပြီး သဘာရှိတဲ့ လှလှဌေးက ကိုယ်တိုင်နေရာချသည်။ ပက်လက်အနေအထားနဲ့ ဝေလင်းမျက်နှာနားသူ က ဖင်ပေးခွသည်။ မိမိကိုတော့ဝေလင်းလီးကို စုပ်ခိုင်းသည်။ ပြီး “သားလေး–လျာဘဲထုတ်ထား–ငြိမ်ငြိမ်နေ ဇက်နာသွားမှာစိုးလို့- တီချယ်ဟာ တီချယ်လှုပ်ရှားမယ်” လို့ပြောသည်။ပြီး လှလှဌေးကဖင်ကို ခါကစားရင်း သူစောက်ဖုတ်ကို ဝေလင်းလျာနဲ့ကို တိုင် ပွတ်သည်။ မိမိကဝေလင်းလီးကို စုပ်ရင်း လှလှဌေးစောက်ဖုတ်ကြီးနဲ့ ဝေလင်းလျာပွတ်နေတာကို စိုက်ကြည့်ရင်း ဖီးလ်ပိုတက်နေရ သည်။ လှလှဌေးလည်း ဝေလင်းလျာနဲ့ စောက်ဖုတ်ကိုထိလို့ ဖီးလ်တက်ကာ တအင်းအင်းနဲ့ညီးရင်း ဖင်ကိုသွက်သွက်လေးခါ ကစား လာသည်။ တခါတခါလှလှဌေးစောက်ပတ်က ဝေလင်းမျက်နှာကိုပွတ်မိနေသည်။ ဒါကြောင့် ဝေလင်း နှာခေါင်းနဖူးနဲ့ပါးတွေမှာ လှလှဌေးစောက်ရည်တွေ ငပေကျံကုန်သည်။ လှလှဌေးကလည်း သူ့သူငယ်ချင်း ရွှေမိလီးစုပ်တာကို ကြည့်ရင်း ဖီးလ်အရမ်း တက်နေသည်။ ဝေလင်းလက်နှစ်ဖက်နဲ့ လှလှဌေးဖင်ကိုမထားပြီး စောက်စိကို ပြွတ်ကနဲ ပြွတ်ကနဲ မြည်အောင် စုပ်လိုက်သည်။
“အမလေးလေး–ကောင်းလိုက်တာကလေးရယ်–တီချယ်ပြီးသွားပြီ အုအူးအီး–တော်လိုက်တာကွာ” ဆိုခွဆင်းသွားသည်။ ပြီး လှလှဌေးက… “မိမိကို. တလှည့်စီစုပ်ပေးလိုက်မယ်” ဆိုဝေလင်းလီးကြီးကိုငုံလိုက်သည်။ လီးတဝက်လောက်နေ အပေါ်အောက် နှုတ်ခမ်းနဲ့ ညှပြီးဖြေးဖြေးချင်းဆွဲ င်္ထုတ်ပေးလာသည်။ ဝေလင်းက လှလှဌေးပုလွေကို ကြိုက်သွားသည်။ ပြီး နောက်တစ်ချက်ပြန်ငုံ တော့ လီးတဆုံး အာခေါင်အတွင်းထိ ထိုးထဲ့ထားသည်။ ဝေလင်းလီးမွှေးတွေနဲ့ လှလှဌေးနှာခေါင်းတောင် ဖိမိနေသည်။ ပြီး ဖြေးဖြေးချင် ဆွဲထုတ်ပေးလာတော့… “အူးဟူး–တီချယ်-သားပြီးသွားလိမ့်မယ်” လို့တောင် ဝေလင်းပြောလိုက်ရသည်။ “ကောင်းလားသား– -ပြီးချင်လည်း–တီချယ်ပါးစပ်ထဲမှာပြီးလိုက်” လို့လှလှဌေးကပြောလို့ မိမိအံ့အောသွားသည်။ လှလှဌေးက လီးရည်တောင်မြိုချမယ်တဲ့လား ဆိုတွေးပြီး ဝေလင်းတော့ သူ့ကိုစွဲသွားရင် ဒုက္ခလို့ပူလိုက်မိသည်။ ဒီတစ်ချက်ပြန်ငုံရာမှာလည်း လှလှဌေးက အာခေါင်ထဲထိ ထိုးသွင်းပြီး ပြန်အထုတ်မှာ ဝေလင်းဘယ်လိုမှ ထိမ်းမရဘဲ လီးရည်တွေအာခေါင်ထဲ ပန်းထွက်သွား သည်။ လှလှဌေးက အလျင်မှီပုံမပျက်မြိုချနေလေသည်။ မိမိက လှလှဌေးကိုကြည့်ပြီး သူက အိမ်ထောင်ကျဘူးခဲ့တာကိုးလို့ တွေး မိသည်။ တဆတ်ဆတ်တွန့်ရင်း ကောင်နေတဲ့ ဝေလင်းကိုကြည့်ရင်း မိမိဘေးကနေလှဲကာ သွားဖက်လိုက်သည်။ လှလှဌေးက လီး ထဲကထွက်လာတဲ့ လက်ကျန်လီးရည်ကို လျာနဲ့သပ်ယူတော့…
“အား–မရတော့ဘူး” ဆိုကုန်းထပြောသည်။ ပြီး… “တော်ပြီတီချယ်-မထိနဲ့အရမ်းယားတယ်- အရမ်းလဲ ကောင်းတယ်” လို့ဝေလင်း ကပြောသည်။ လှလှဌေးက ဝေလင်းအရှိန်မကျသေးတာမို့ ဝေလင်းနို့လေးတွေကို လျာနဲ့ထိုးယက်ပေးရင်း ဝေလင်းကို အမောဖြေ ပေးနေသည်။ မိမိက…“မောင်–ဌေးစုပ်တာ-တအားကောင်းလားဟင်” .လို့မေးလိုက်သည်။ ဝေလင်းက… “တကဲ့ပုလွေ expartဘဲ မမ” လို့ ပြောတော့မိမိက… “မင်းငါ့ချစ်ကလေးကိုတော့–လုမသွားနဲ့နော်” လို့ပြောလိုက်တော့… “စိတ်ချပါရွှေမိရာ–ခနဘဲငှားမှာ ပါ” လို့ပြောရင်း မိမိနဲ့လှလှ ဌေးတို့ရီနေကြသည်။ လှလှဌေးက ဝေလင်းတစ်ဖက်နေခေါင်းမော့ ပြီး ဝေလင်းကို ကစ်ဆင်ဆွဲ နေသည်။ ဝေလင်းအောက်နှုတ်ခမ်းကို ပြုတ်ထွက်ပါသွားလုမတတ် စုပ်ပြီး ဝေလင်းလျာကို သူ့လျာကြီးနဲ့ မျိုးစုံကလိပေးနေသည်။ ဝေလင်းဆီက ညီးသံတောင်ထွက်လာသည်။ မိမိက သူတို့နမ်းနေတာ ကိုကယ်တခြမ်းစောင်းကြည့်ရင် ဝေလင်းလီးပျော့ကြီးနဲ့ လီး မွှေးတွေကို ပွတ်ဖွကစားပေးနေသည်။ ဝေလင်းက အခုမှလှလှဌေး နဲ့ကစ်ဆင်ရိုက်ဖူးပြီး အတော်ကျွမ်းပါလားလို့ တွေးမိသည်။ လှလှဌေးက သဝေလင်းပါးစပ်နားကိုသူ့နို့ပို့ပြီး…
“တီချယ်ကို–နို့စို့ပေးအုံး” လို့ပြောလိုက်သည်။ ဝေလင်းက တစ်ဖက်လှည့်ပြီး လှလှဌေးနို့တွေကို စို့ပေးနေသည်။ လှလှဌေး ညီး သံလေးထွက်လာပြီး ဝေလင်အောက်ဖက်ကို ရွှေ့ကာ ပုလွေကိုင်ပေးပြန်သည်။ ပြီး… “မိ-ခုနကိုလုပ်သလို–မင်းကလှုပ်ရှား ပေးလိုက်” လို့ပြောလာလို့ မိမိတစ်ယောက် ဝေလင်းမျက်နှာနား ဖင်ပေးကာခွ တက်လိုက်သည်။ ဝေလင်းက လျာလေးထုတ်ထား ပေးပြီး လှလှဌေးကဖင်ကို လှုပ်ရမ်ူကာ စောက်ပတ်နဲ့လျာကို ပွတ်တော့သည်။ ဒီတခါ လှလှဌေးက အာဂေါင်ထဲထိ မထည့်ဘဲ ဒစ်ကို သာ စုပ်လိုက်ဒစ်နားက အသားနုလေးထိသာ နှုတ်ခမ်းနဲ့ဆောင့်လိုက်လုပ်ပြီး လီးကြီးကို ဗိုက်ပေါ်လှန်ချကာ တဆတ်ဆတ်နဲ့ မနာ့တ နာသွားနဲ့ ကိုက်နေသည်။ လီးကပြန်တောင်လာပြီး ထောင်လာသည်။ လှလှဌေးက ဂွင်းထုပေးနေရင်း.. “မိမိ–လာသူငယ်ချင်း -မင်း အပေါ်ကနေလိုက်” “အူးဟူးဟူး–အို–အီးဟီး” နဲ့မိမိငြိမ်ကျသွားတော့သည်။ ကိုယ်တိုင်လှုပ်ရှားပြီး ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်သလိုလုပ်ယူ လိုက်ရလို့ မိမိအရမ်းကောင်းသွားသည်။ သူငြိမ်နေရာကနေ ခါးကိုဝိုက်ကာ လှည့်မိနေရင်း စောက်ဖုတ်ထဲက အယားမပြေဘဲ ကောင်းနေသည်။ လှလှဌေးလည်း ဖင်ကိုခါရင်း ဝေလင်းလျာနဲ့စောက်စိကို ထိမိလွန်းလို့ စောက်ဖုတ်တစ်ခုလုံးယားပြီးအရသာတွေ့ နေရှာသည်။
“သားတီချယ်ကို–ခုနလို–စုပ်ပစ်လိုက်” ဆိုဖင်ကိုကြွပေးလိုက်သည်။ ဝေလင်းကလည်း စောက်စိကို သူနှုတ်ခမ်းထဲပါလာတဲ့အထိ ဖိ စုပ်ပစ်လိုက်သည်။ “အအ–အို–အီး-မလွှတ်နဲ့–အူး–ရွှီး- ကောင်းလိုက်တာ ကလေးရယ်” ဆိုလှလှဌေးလည်း စောက်ဖုတ်ကယား ပြီး အကြောတစ်ထောင်စိမ့်သွားရှာသည်။ “အင်းဟင်း–မိ–ဖင်ပြီးရင် ကိုယ့်အလှည့်ပေးအုံးကွာ” လို့လှမ်းပြောသည်။ မိမိလည်း ဘာဂျာအမှုတ်ခံရာကနေ လီးနားမှာသွားခွပြီး ဆောင့်ချလိုက်သည်။ ဗြစ်ကနဲ နာကျင်မှုနဲ့ အကောင်းရောထွေးသွားသည်။ မိမိက အတွေ့အကြုံမရှိတော့ သူလုပ်တတ်သလိုဘဲ လှုပ်ရှားလိုက်သည်။ လှလှဌေးက မိမိနေရာကို ဝင်ယူပြီး ဖင်ကိုခါကာ စောက်ပတ်အ ယက်ခံပြန်သည်။ ဝေလင်းက ဘာမှမလှုပ်ရှားရပေမဲ့ လျာရောလီးရော အလုပ်လုပ်ရနေသည်။ မိမိစောက်ရည်တွေက ထိန်းမနိုင် အောင်ထွက်ကျလာခဲ့သည်။ ဆိုတောင်းဆိုလိုက်သည်။,မိမိလည်း နှစ်ချီဆက်တိုက်ပြီးသွားပေမဲ့ အာမရသေး။ ဒါမဲ့လှလှဌေးကို အားနာပြီးဖယ်ပေးလိုက်သည်။ ပြီးဝေလင်းဘေးမှာ လှဲအိပ်ကာဖက် ပြီးနေလိုက်သည်။ လှလှဌေးက ဝေလင်းပေါင်နှစ်လုံးကို ဆွဲစိ လိုက်သည်။ မိုပေါ်ထောင်နေတဲ့ ဝေလင်းလီးဒစ်ကြီးက ပိုတင်းပြီးကြီးလာသည်။ ဒီအထာကိုသိတဲ့သူမို့ ပုံစံချလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ပြီးသူတက်ခွကာ လီးကိုကိုင်ပြီ်း စောက်ဖုတ်ဝမှာတေ့ပြီး ဖြေးဖြေးချင်း ထိုင်ချသွင်းလိုက်သည်။
“အူးဟီး–ထိလိုက်တာကွာ–အမလေး–ကလေးငြိမ်ငြိမ်နေ –တီချယ်လိုးမယ်–မလှုပ်နဲ့” ဆိုတဘွတ်ဘွတ်နဲ့ဆောင့်နေတော့သည်။ မိမိက လှလှဌေးစောက်ဖုတ်ကြီးထဲ လီးကြီးဝင်ထွက်နေတာကို ကြည့်ရင်း စောက်စိလေးကို လက်နဲ့ ပွတ်ဖီးလ်ယူနေလေသည်။ ပွတ်နေရင်း ယားပြီးပြီးသွားပြန်လို့… “အအ-အား-အင်းအီး” ဆိုတွန့်လိန်နေပြန်သည်။ လှလှဌေးလည်း ဝေလင်းရဲ့လျာအစွမ်းနဲ့ ခံစားတာမို့ ပြီးချင်လာလို့ အတင်းဖိဆောင့်ရင်း.. “အမလေးလေး–ကောင်းလိုက်တာကွာ” ဆိုဝေလင်းကိုယ်ပေါ်မှောက်ကျလာ တော့သည်။ မိမိက သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ကိုယ်လုံးကြီးတွေကို ပူဖက်ခွပြီး စောက်ဖုတ်ထဲကယားတဲ့အရှိန်ကို ညှောင့်ရင်း ဖီးလ်ယူနေ တော့လေသည်။ သူရဲ့ ပထမဆုံး ကာမအတွေ့အကြုံမှာပင် 3some အတွေ့အထိနဲ့ အရသာထူးကဲနေရတော့သည်။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged ထိနျးမရတော့ပါ